घनश्याम, योगेश र रामकुमारीको रुवाबासी ! किन रोए उनीहरू ? – Butwal 24 News
Uncategorized राजनीति रोचक
हतास भएका नेताहरूले नेपालकै अघि आँसु खसाल्दै अब धेरै विवाद नगरौँ भने तर नेपालले अडान छाडेनन् । अन्ततः पार्टी विभाजन भएरै छाड्यो । ती नेताकाअनुसार नेपाल निवासमा सबैभन्दा बढी चित्त दुखाएर आँसु झार्ने नेता भने गोकर्ण थिए । न्युज कारखाना